जसपा विवाद झन् पेचिलो बन्दै : RajdhaniDaily.com
Home Breaking News जसपा विवाद झन् पेचिलो बन्दै
जसपा कार्यकारिणी समितिको १४ वैशाखमा बसेको बैठकले पार्टी निर्णय विपरीतको कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै चार सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहाय यादवले बताए । तर, जसपा कार्यकारिणी समितिका अर्का सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले १४ वैशाखमा कुनै बैठक नबसेको बताए । जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष यादवले नेताहरूको घरघरमा पुगेर हस्ताक्षर संकलन गरेको हुन सक्ने कर्णले बताए ।
पार्टीबाट बर्खास्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसद शुक्रबार नै पार्टीविरुद्ध रिट दायर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । पदमुक्त भएपछि उनीहरू पार्टी र प्रदेशसभाले अन्याय गरेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतसमेत पुगे पनि समय अभावका कारण आइतबार मात्र निवेदन दर्ता हुनेछ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले निकालेको सूचनाअनुसार सांसदहरू पाण्डेय, यादव, रायमाझी र कल्पना पाण्डेको पद गुमेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्त्री ऐन २०६३ को दफा ३४ बमोजिम जसपाले चार सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाले उठाउँदै आएका विभिन्न मागमध्ये मुद्दा फिर्ताको माग पूरा गरेका छन् । बाँकी रहेका मुद्दा फिर्ताका माग केही पूरा गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् ।
मुद्दा फिर्तापछि जसपा अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्दै गएको प्रक्रिया सार्वजनिक रूपमा दिइरहेका छन् । तर, अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद्का अध्यक्ष भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई समूहले पार्टी कुनै पनि हालतमा संघीय सरकारमा सहभागी नहुने अडानमा छन् ।
Exclusive सुभाष साह - December 1, 2020 0
भर्खरै सुभाष साह - July 24, 2020 0
बिचार सुभाष साह - March 30, 2020 0
Not-to-be-missed सुभाष साह - February 19, 2020 0
६ अर्बको आईपीओ पाइप लाइनमा काठमाडौं । धितोबजार चम्किन थालेकै बेला बजारमा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) आउने भएको...
सुदूरपश्चिममा कोभिडका बिरामीलाई आवश्यक पर्ने औषधि अभाव
Breaking News दीपक ओली - May 24, 2021 0
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोभिडबाट संक्रमित भएका लागि आवश्यक पर्ने औषधिको अभाव भएको छ । कोभिडका बिरामीलाई अत्यावश्यक पर्ने मेरोपेनम, लिभोफ्लोक्सासिन, हेपारिन जस्ता औषधिले...
Breaking News सुभाष साह - August 13, 2020 0
अर्थ सुभाष साह - July 1, 2020 0